Date My Pet » Top 6 Antony Nahoana Cooking dia Hot ny Romance
Last nohavaozina: Sep. 24 2020 | 2 min namaky
"Ny fomba am-pon'ny olona izany ny kibony."
Amin'ny maha-tena mitonona ho foodie, I afaka mitanisa antony maro, fa eto dia ny tampony 6 antony fandrahoan-tsakafo dia "mafana,"Indrindra amin'ny ankehitriny ny hoe mampiaraka sy ny sehatra fivadiany.
1. Cooking dia manome ny tonga lafatra "fomba fahandro" ny olon-tiany.
Toy ny ankamaroan'ny vehivavy, Faly be aho fa wined, ary nisakafo tao amin'ny trano fisakafoanana raitra amin'ny lehilahy suitors ny tao amin'ny dingana mikasa. Fa, toy ny fifandraisana nivoatra, misy zavatra tena "akaiky" momba ny sakafo masaka an-trano Nandray anjara tamin'ny fiainana manokana ny olona iray an-trano— amin'ny labozia, kely mozika, dihy sy ny fahafahana aoka ny volo toy ny toe-javatra teo tononiny. Nokaravasina crème misy?
2. Mahandro sakafo ao an-trano dia noho ny trano fisakafoanana matetika salama misakafo.
Rehefa mihinana avy, sakafo matetika no ampiasaina, nanompo amin'ny manan-karena sy ny fattening sauces, nendasina amin'ny matavy be loatra, "Faran'izay salantsalany", ary tsy araka ny tokony ho fiomanana amin'ny sakafo ho an'ireo fameperana sy ny sakafo allergies. Nisakafo avy eo dia mety ho lafo kokoa noho ny iray fomba.
3. Culinary fahaizana manampy ny vehivavy na ny lehilahy na ny tantaram-pitiavana Resume.
Eritrereto ho toy ny mampitombo ny "Blue Boky" sarobidy eo mampiaraka tsena.
Eto no misy lehilahy vao tsy ela akory mpanoratra nanoratra: "Ny isan'ny vehivavy izany andro izany ampahibemaso miaiky tsy afaka mahandro dia mahagaga. Rehefa hoy ny vehivavy iray dia tsy afaka mahandro, eritreritra voalohany izay tonga ho be dia be ny sain'ny olona tsara no "Ahoana ny helo no mikarakara ny tenanao ary ahoana no ho afaka hikarakara ahy?"
4. Cooking dia mamela anao ho lasa mahaleo tena tanteraka sy kokoa ho toy ny vehivavy.
Tsy misy intsony ny miandry ny mamanao ny manamboatra ny toerana tena sakafo, na manantena fa manodidina ny trano fisakafoanana ho azy ny sakafo ny Alatsinainy, na dialing ny maka-avy; izany hoe afaka manamboatra ny tenanao!
5. Mahandro sakafo seduces ny saina rehetra.
Mahafinaritra Avy amin'ny fofona manitra, ny maso-manintona fandaharana eo amin'ny lovia, amin'ny loko isan-karazany sy ny textures, ny any an-danitra tsiro— tsara dia afaka manome fahafaham-po sakafo ireo izay mikarakara ny amin'ny ambaratonga maro.
6. Cooking dia fomba mahafinaritra hifandray.
Afaka mahandro sakafo ary afaka manao ny salady. Fahano ny hafa, na angamba tantara sy ny fomban-drazana anjara mifandray amin'ny fianakaviana fomba fanamboarana. Mahandro sakafo mahatonga ny olona hahatsapa ampihantaina, ary catered ny. Ary raha ny anao manokana, Tsy izany koa ve no te ho azy hahatsapa?
Ary misy vaovao tsara eto: Tsy voatery hanao sonia ho culinary sekoly, na manaiky ho tsisy fiafarany fitsarana sy ny fahadisoana; maro ireo toerana mahandro sakafo an-tserasera izay manome dingana-by-dingana Tutorials mba hampitombo ny nahandro IQ!
Ilaina hafa tetika dia ny hividianana cookbooks nanoratra ho an'ny ankizy. Manome lehibe hanombohana ny fianarana momba ny fiarovana an-dakozia, fitsipika fandrefesana, ary mora ny hanaraka fomba fanamboarana.
Tsarovy, mahandro sakafo no fomba lehibe ho heverina "mafana" sy ny antso ho amin'ny homana ny amin'izao fotoana izao ny olona!